'मनसुन' को उपन्यास अंश - साहित्य - साप्ताहिक
ब्यान्ड बाजावालाहरू केही पर नेपाली फिल्मका गीतको धुनमा बाजा बजाइरहेका थिए । मलाई बिहेको मन नपर्ने कुरा चाहिँ यही थियो— बाजागाजा † प्याँप्याँ र प्वाँप्वाँको आवाज । यतिखेर बजिरहेको थियो, सिम्पल–सिम्पल कान्छीको... । के ब्यान्डवालाहरू उसैलाई हेरेर त्यही अनुरूपको गीतको धुन बजाइरहेका थिए ?
गीत फेरियो । ब्यान्डवालाहरूले गाला रातै गाला रातै... गीतमा बाजा बजाउन थाले । कतै उसलाई हेरेर त बजाइरहेका छैनन् ? मेरा आँखा उसका गालामा पुगे । पिङ्क कलरको देखियो । रातो होइन रै’छ । ब्यान्डवालाको निसाना अन्तै
कतै रहेछ ।
ऊ मेरा आँखालाई तिख्र्याएर गएकी थिई । मुटुलाई रित्तो बनाएर गएकी थिई । धड्कनलाई जिस्क्याएर गएकी थिई । अक्सर यसरी नै गायब हुन्थे बिहेबाट केटीहरू । कहाँबाट आउँथे अनि कहाँ जान्थे, पत्तै हुन्नथ्यो । ब्यान्ड बाजावालाहरूले नाइँ नभन्नु ल बजाइरहेका थिए । केटी कहाँ अलप भैसकेकी थिई, केही भन्न पाएको भए पो ? के–को नाइँ नभन्नु ल !
सत्ता र नारी नै साहित्यका विषय